Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည် China Manufacturers & Suppliers & Factory
Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည် ထုတ်ကုန်များ)
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည် ဖလိုရင်းအရည်ပျော်ပစ္စည်းအရည် Perfluorinated တ္ထုများတစ်ခုမျိုးဖြစ်ပါသည်, ကက Non-အန္တရာယ်ရှိကုန်စည်သို့မဟုတ် Non-ပေါက်ကွဲဖြစ်ပါသည်, လေစွမ်းအင်မျိုးဆက်များအတွက်အသုံးပြုသည် non-မီးလောင်လွယ် flash ကိုအမှတ်, အစားထိုးလို့မရတဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်, immersive...
ကျောက်စိမ်း / သစ်သားစက်ဖြင့်အချောကိုင်ထားသောအရည် Fluorid Cooling အရည်
ကျောက်စိမ်း / သစ်သားစက်ဖြင့်အချောကိုင်ထားသောအရည် Fluorid Cooling အရည် တရုတ်အမည်: octafluoroisobutyl အီ CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 163702-06-5 ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်: CL7200 alias ကို: Ethyl nonafluoroisobutyl အီ EINECS မရှိပါ။ မရှိပါ မော်လီကျူးပုံသေနည်း: c6h5f9o မော်လီကျူးအလေးချိန်: 264.09g / mol...
ဗြိတိန်အသုံးပြုခြင်းအေးအရည် အလတ်စားအေး Fluorocarbon ကြောင့် 55KV ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ, နှင့်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့အားရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးမြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်သောထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်, 1.62g / ml သိပ်သည်းဆများမှာ က The...
System ကို Xiaomi က Xeon အေးအရည်
System ကို Xiaomi က Xeon အေးအရည် အလတ်စားအေး Fluorocarbon ကြောင့် 55KV ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ, နှင့်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့အားရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးမြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်သောထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်, 1.62g / ml သိပ်သည်းဆများမှာ က The...
ဖလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်အရည် Xiaomi က Black ကငါးမန်းအေး
ဖလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်အရည် Xiaomi က Black ကငါးမန်းအေး အလတ်စားအေး Fluorocarbon ကြောင့် 55KV ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ, နှင့်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့အားရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးမြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်သောထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်, 1.62g / ml သိပ်သည်းဆများမှာ က The...
ဝါသနာရှင်မရှိရင်ရေအစားထိုးအေးအရည် အလတ်စားအေး Fluorocarbon ကြောင့် 55KV ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ, နှင့်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့အားရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးမြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်သောထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်, 1.62g / ml သိပ်သည်းဆများမှာ က The...
Reservoir မရှိရင် Wattage အေးအရည်
Reservoir မရှိရင် Wattage အေးအရည် အလတ်စားအေး Fluorocarbon ကြောင့် 55KV ထက် သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ, နှင့်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့အားရှိပါတယ်။ ဒီစီးရီးမြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်သောထူးခြားတဲ့ Perfluorinated အရည်, 1.62g / ml သိပ်သည်းဆများမှာ က The...
Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည် ကားများအတွက် Perfluorinated အရည် ဆာဗာများအတွက် Perfluorinated အရည် ဂီယာအုံများအတွက် Perfluorinated အရည် Generator ကိုများအတွက်ဓာတု အင်ဗာများအတွက် Perfluorinated ဓာတု အဲယားကွန်းများအတွက် Perfluorinated အရည် Generator ကိုများအတွက် Dielectric Coating